4th February 2019 - Samasta Khabar
क्रिकेट रंगशाला निमार्ण शुरु, धुर्मुश सुन्तली फाउण्डेशनमा १ करोड संकलन
धुर्मुश सुन्तली फाउण्डेशनले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १६ शान्तिचोकमा रहेको २० बिगाह ६ कट्ठा जग्गामा निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको आइतबार एक समारोहबीच डीपीआर सुरु गरिएको छ । सो सुभारम्भ कार्यक्रममा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरिएको छ । फाउण्डेसनले रकम संकलनबारे कुनै योजना नभए पनि उक्त रकम संकलन भएको बताएको छ । संकलनबारे नसोचिएको र स्वतःस्फूर्त रुपमा दाताहरुले आर्थिक सहयोग गरेको धुर्मुश सुन्तली फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले जानकारी दिए । उक्त शुमारम्भ कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष प्रकाश दवाडीले २५ लाख, आशा…
आज मिति २०७५ माघ २० गतेको राशिफल ! तपाईको दिनको सुरुवात !
मेष समयमा होस नपुग्नाले व्यवहारमा पछि परिएला। आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अवसरका लागि पनि निकै दौडधुप गर्नुपर्ला। समय दिन नसक्दा बन्न लागेको काम रोकिन सक्छ। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ला। वृष न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बन्नेछ । परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ र अभिभावकले सन्तुष्टि जनाउने छन् । मिथुन अध्ययनमा बाधा पुग्नेछ भने अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्नेछ। आफ्ना कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। हुलमुलमा धनमाल जोगाउन सजग रहनुपर्ला। स्वास्थ्यका लागि आराम र खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। कर्कट विशिष्ठ व्यक्तिको साथ पाईनेछ । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा…